Indasitiri yeUganda yekushanya ichivhurwazve
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Indasitiri yeUganda yekushanya ichivhurwazve
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda inoda kugamuchira vashanyi zvakare. Pamberi pekuvhurwa kwemiganhu kunosanganisira Entebbe International Airport musi wa1 Gumiguru 2020, Mutungamiri weUganda, Yoweri Museveni, muhurukuro yake yeterevhizheni manheru ano e20 Nyamavhuvhu, akazivisa kukwidziridzwa kwevanoshanya seizvi:
Zvibvumirano pane vashanyi zvichasimudzwa chero ivo vakaedza zvisina kunaka nezve COVID-19 72 maawa asati asvika.
Zvekuti vanofamba vakananga kwavanosvika kana mahotera akasarudzwa vasina kusanganiswa nenharaunda.
Mahotera achabvumidzwa kushanda sezvakabvumiranwa mukucherechedzwa kweiyo Standard Operational Procedures (SOP's).
Maresitorendi acharamba achishanda nevashoma vashandisi kunyanya pakutora / kuenda-kuenda kana kuendesa hwaro.
Mutungamiriri zvakadaro akaramba kuvhura mabhawa nekuti hunhu hwevatenzi haugone kuvimbiswa uye nekudaro vanovatendera kuti vaone kutenderera kwenzanga.
Tsika mbiri-dzegore dzekudzingisa tsika inoitwa nerudzi rweBamasaba runobva kumatope eGomo reElgon rakabvumidzwa. Ivo vanofanirwa kuita yavo tsika chero vakatevera izvo zvakabvumiranwa maSOP sezvakabvumiranwa nebazi rezvehutano. Mapfumo avo emitambo ye'embalu 'anozivikanwawo sekuti' kadodi 'haatenderwe kuenderera nekuti mumashoko aMutungamiriri,' iko kuungana kune njodzi '.
Akawedzera macovid19 makesi anomira pa6287 aine 63 vakafa kubvira kukiya kwakatanga kuziviswa zvichitevera kuvharwa kwemiganhu yese musi wa21 Kurume 2020.